Icjaaska Cilmiga ah ee Quraanka | gaaldiid - Part 2
Home > Icjaaska Cilmiga ah ee Quraanka > Page 2	Mucjisooyinka Quraanka ee Sayniska 3 aad
Magaca Allah ayaan ku bilaabaynaa, waxaanan ku sallinaynaa Nabigeenii Muxamed oo ahaa Naxariistii Caalamiinta, waxaanan Ilaahay ka baryeynaa inuu Naxariis iyo Nabadgalyo korkiisa yeelo isaga, ehelkiisii, saxaabadiisii iyo dhammaan muslimiinta raacday jidkiisa...
Magaca Allah ayaan ku bilaabaynaa, mahaduna waxay usuganatahy Allah (S.W.T) waxaan kaloo ku sallinaynaa Nabigeena Muxamed (N.N.K.H). Hadda kahor waxaynu sharraxnay mucjisooyinka sayniska ah ee lagu xusay Quraanka iyo Sunnada Nabiga (N.N.K.H). Kumanaankun oo...
Magaca Allah ayaan ku bilaabaynaa, mahaduna waxay u sugnaatay Allah (S.W.T) sidoo kalena waxaan ku sallinaynaa raxmadii iyo naxariistii Caalamiinta sayidkeenii Nabi Muxamed (N.N.K.H). Walaalayaal barnaamijkani waa barnaamiyo cusub oo la magac baxay Mucjisooyinka Sayniska...
Saacada Qayaame waa Qariib
Calaamadihii la arkay ee astaamaha u ahaa Saacada Qayaame, subxaanAllah, Ilaahay hayna asturo.
Mucjisada Quraanka ee Nabi Ciise iyo Nabi Aadam
Magaca Ilaahay ayaan ku furufuranaynaa, waxaana mahadda iska leh Allah (S.W), waxaan kale oon ku sallinaynaa Nabigeena Muxamed (N.N.K.H). Walaalayaal kusoo dhowaada mucjiso kale oo Kitaabka Quraanka lagu xusay, sidaynu wada ogsoonahay Kitaabka Quraanka...
Sirta Ahraamta oo Quraanku kashifay
Sirta dhisida Ahraamta Masar iyo Quraanka. Ahraamta Masar ee aadka u waaweyn oo inbadan cajsi galisay dhammaan Culumada baadha qaabkii loo dhisay iyo qalabkii la adeegsaday markii la dhisayey ayaa dhowaan daaha laga qaaday,...
Mucjisada Suurada Raxmaan
Maalinba maalintta ka danbaysa waxa isasoo taraya Mucjisooyina Quraanka Kariimka ah, oo maalinba waxa daaha laga qaadaya arrin cilmi ah oo uu Quraanku ka hadlay 1400 oo sano ka hor. Inshallah, waxan soo bandhigi...
Sagaal iyo Sagaashanka Magac ee Ilaahay 1 الرحمن Arr-Raxmaan Eebaha leh Naxariis guud ee wayn (U naxariistaha Uunka oo dhan). 2 الرحيم Arr-Raxiim Eebaha leh Naxariis gaarka ah (U naxariistaha Mu’miniinta). 3 الملك Al-Malik...
Icjaas, Wabi Naar ah
Magaca Ilaahaybaan ku bilaabnay, mahad dhamaanteed waxay u sugnaatay Ilaahay Subxaana wa tacaala. Naxariis iyo Nabadgalyo korkiisa ha ahaato Rasuulkii Suubanaa ee Muxamed (N.N.K.H). Waa mar kale iyo mucjisooyinkii cilmiga ahaa ee Diinta Islaamka....
Dhacdo layaableh ayaa ka dhacday wadanka Brazil sanadkii 2010 kii iyo gobolka Hawaii arrintaas oo mar kale soo laabatay laguna arkay Wadanka Australia. Dhacdadu waxa weeye Dabayl hoosta ku wadata dab ayaa haleeshay wadanka...